Ny tena antony hanakarama mpampianatra media sosialy | Martech Zone
Alahady, Septambra 26, 2010 Alatsinainy Aprily 20, 2015 Douglas Karr
Nandritra ny folo taona lasa, niasa tsy an-kijanona aho tamin'ny fananganana mpanaraka an-tserasera, fahefana ary farany niroborobo raharaham-barotra. Ankehitriny, miatrika olona maniry ny handray ny serivisiko aho mba hahafahako manampy azy ireo hanao toy izany koa. Indraindray izy dia orinasa lehibe manana talenta tsy mampino ary afaka mamonjy. Indraindray tsy izany no izy ary manome serivisy hafa aho.
Nandritra izay taona maro izay dia nijery ny hafa nihoatra ahy tamin'ny Internet aho ary nianatra zavatra betsaka. Nihoatra ny maro hafa koa aho… vitsy ny manana boky navoaka na orinasan'izy ireo manokana izay mifantoka amin'ny fahaizany. Nomena ahy ny fahitako izay mandeha, izay tsy mandeha, inona ny fampiasam-bola afaka manomboka ny fahefanao, ary koa izay mety hanimba azy.
Na eo aza izany rehetra izany fahalalana izany dia tsy tena antony tianao hanakaramana ahy. Hita eo izany fampahalalana izany… an-tserasera amin'ny alàlan'ny lahatsoratro, my bilaogin'ny orinasa boky, sy ny fampisehoana ataoko. Raha manaraka ahy ianao, na izay iray hafa antsoina hoe mpampianatra media sosialy, saika ny rehetra dia nametraka ny fampahalalana maimaim-poana tany. Azo antoka - maro no manolotra fanofanana voafintina mba hahazoana taranja fianjerana (antony lehibe hijerena antsika hiteny izany)… saingy ny tiana holazaina dia hoe mbola afaka mahazo izany ianao nefa tsy manakarama anay.
Ny tsy azonao maimaimpoana dia ny fahefanay. Ireo gurus media sosialy dia manana mpanaraka be dia be - matetika ao anaty akany mahafinaritra. Ny akany dia ny marketing amin'ny Internet, ny marketing anaty ary ny fampidirana ireo haitao fikarohana, sosialy ary Internet hafa hananganana orinasa. Na dia mifampiresaka amin'ireo orinasa marobe amin'ireo lohahevitra ireo aza aho - ireo orinasa hafa izay nanambola tamin'ny serivisiko dia mitady zavatra hafa tsy mitovy…
Mitady ny ahy izy ireo fankatoavana azon'izy ireo atao manangana fahefana haingana kokoa… ary koa fidirana amin'ny mpihaino ahy.
Ny mpankafy, mpanaraka, mpamaky ary mpamandrika dia entam-barotra sarobidy ankehitriny… indrindra raha afaka manohy mampitombo an'ity manaraka ity ianao. Misy ny olona mangataka ahy hiteny satria nahita sy nankafiziko ny fampisehoana nataoko - fa be ny hafa manasa ahy hiteny satria fantatr'izy ireo fa hampandroso ny orinasany na ny kaonferansa ho an'ny mpihaino ahy aho. Raha miteny aho - tadiaviko ho hetsika mahafinaritra io… amidy amin'ny buzz manerana ny Internet. Raha ny marina rehetra dia kely ny vintana hanandratako hetsika iray tsy andraisako anjara… Tsy dia mientanentana fotsiny momba azy ireo hampiroborobo azy ireo am-pahatsorana aho… ary afaka milaza izany ny mpihaino ahy.
Izany dia nilaza fa ataoko lohahevitra tsara ny fahafahako miteny sy ny fanekeko. Tsy manipy fanekena fotsiny aho raha tsy mino ny loharano - na dia karamaina aza aho amin'izany. Miara-miasa amin'ireo orinasa maro izay tsy mbola nolazaiko an-tserasera mihitsy aho. Tsy hoe tsy mino azy ireo ho mendrika aho, fa tsy misy dikany ny manonona azy ireo amin'ny mpihaino ahy. Ny fanolorana dia tsy hijery toerana ary terena.
Gaga aho amin'ny isan'ny mpampianatra media sosialy manolotra lahatsoratra misy karama, bitsika be karama ary fanamafisana ara-bola nefa tsy manome toky fa manome lanja ny mpihaino azy ireo izany. Nametraka sary cheesy izy ireo niaraka tamin'izy ireo nijoro teo akaikin'ny olona iray manan-danja mba hanomezana fahatsapana fa toa manan-danja izy ireo… jereo ny sary etsy ambony;).
Miezaka ny hisoroka ireo tetika ireo aho… mety ho fanompana ny mpanatrika niasako mafy ny fananganana azy ireo ary notandindomin-doza azy ireo. Heveriko fa paikady fotoana fohy hividianana vola izany - ary manambany ny mpihaino azy rehefa mandeha ny fotoana. Maro amin'ireo mitadiava vola amin'ny Internet ataovy izany. Tsy maintsy mamitaka sy mividy fanamarinana izy ireo mba haharaka ny persona goavambe noforonin'izy ireo an-tserasera. Tonga ny mpihaino azy ireo ary hitany fa voafitaka izy ireo.
Raha tena te hanana fisian-tserasera lehibe sy fidirana amin'ny mpihaino a mpampianatra media sosialy, ny fomba mora indrindra hanaovana izany dia ny manakarama be mpampianatra media sosialy izay manana ity manaraka ity izay irinao ny hidiranao sy hanorenanao fahefana. Eo ambanin'ny torolàlana FTC dia holazaiko foana fa mpanjifa izy ireo na omena onitra noho ny fanekeko aho. Satria nitandrina aho mba tsy hamoaka ny mpihaino ahy amin'izay te-hanipy koba, dia tsy raharahain'ny mpihaino ahy ny karamako. Nanjary fantatr'izy ireo fa na ny fanekeko karama aza dia hanome lanja foana.
Ny fanakaramana ny mpampianatra haino aman-jery sosialy dia afaka manome anao fampahalalana lehibe sy fakan-kevitra izay hanampy amin'ny fitondrana ny orinasanao… fa ny tena antony hanakaramana iray dia ny fidirana amin'ny mpihaino azy sy ny fahefana amin'ny alàlan'ny fanekena. Raha tsy misy an'io dia manana lalana lavitra eo alohanao ianao. Amin'izany dia azonao atao ny manomboka ny fisian'ny media sosialy sy ny fahefana an-tserasera.
Tags: douglas karrseth godinmpampianatra media sosialy
Miteny amin'ny fitenin'ny mpijery anao